သမ္မတရှီကျင့်ဖိန် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းဆန်းရှီးပြည်နယ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေး - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ ပင်လယ်ပြင်ပေါ်တွင် ရုရှားတိုက်လေယာဉ်က အမေရိကန်ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကို လိုက်ပါစောင့်ရှောက်
ဆန်းရှီး၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်သည် စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံ ဆန်းရှီးပြည်နယ် ယွိလင် မြို့သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ရှီသည် မီကျိ စီရင်စုရှိ ယန်ကျားကော် တော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ် ပြခန်းသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းပြခန်းနေရာ မပျောက်ပျက်အောင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားမှုများနှင့် တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်များကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ယန်ကျားကော် တော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ် ပြခန်း (Yangjiagou revolutionary memorial Hall) မှ ဒုတိယ ပြတိုက်မှူး Liu Cuixia က “ကျွန်မမြင်တာတော့ ရှီကျင့်ဖိန်ဟာ ဖော်ရွေကြင်နာတတ်သူတစ်ဦးပါ၊ သူဟာ ဆန်းရှီးမြောက်ပိုင်းကို ပြန်လာတဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ဦးလိုပါပဲ၊ ဒီကျေးရွာမှာ တစ်ခါတုန်းက ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော် နေထိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီနေရာဟာဝေးလံခေါင်သီတဲ့ကျေးရွာတစ်ခုဆိုပေမယ့် အလွန်ထုထည်ကြီးမားတဲ့သမိုင်းကြောင်းလွှမ်းမိုးထားတဲ့ ဒေသဆိုလည်းမမှားပါဘူး” ဟုဆိုသည်။
ယင်းပြတိုက်မှူး Chang Tianmin က “ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟာဆိုရင် ဆန်းရှီးပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ သိပ်ပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အဦနဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို သူက ကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ပါတယ်၊ သူဟာ ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ နေရာဟောင်းကို ပိုပြီး ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုပါတယ်၊ အဲဒီနေရာမှာ ခပ်ကြာကြာနေပြီးတော့မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးပါတယ်၊ သူကပြောပါသေးတယ် ပြည်သူတွေရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးစစ်ပွဲကြီးကို ယန်ကျားကော်မှာ စတင်အမိန့်ပေးခဲ့တာပါ ၊ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး တော်လှန်ရေးဌာနချုပ် တည်နေရာဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ ဟာ မီကျိစီရင်စုရှိ ယန်ကျားကော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။
Chang က “ယန်ကျားကော် တော်လှန်ရေးစခန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ပါတီရဲ့ မူဝါဒတွေနဲ့ သိသာထင်ရှားခဲ့တဲ့ ဗျူဟာတွေရဲ့ တမူထူးခြားမှုတွေကို အမြဲအမှတ်ရနေရပါမယ်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရဲ့ သင်ကြားမှုတွေနဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို ကျွန်တော်တို့လုံးဝ မမေ့လျော့သင့်ပါဘူး၊ ဒါ့အပြင် တော်လှန်ရေးအမွေအနှစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Liu က “တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေကြားက ဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာရယ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အနီရောင်နိုင်ငံရေးအင်အားစုဟာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲစွာအနိုင်ပိုင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာရယ် ကျွန်မတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ဘဝတွေနဲ့အတူ တရုတ်နိုင်ငံသစ်ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရယ်ကို လူတွေ ဒီထက်မကသိရှိစေဖို့လုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Xi inspects northwest China’s Shaanxi Province
Xi Jinping visited Yulin City in Shaanxi Province on Monday.
He came to Yangjiagou revolutionary site in Mizhi County to learn about strengthening the protection of revolutionary sites, as well as sustaining revolutionary legacy. #GLOBALink